Girl Death koshi death hydropower nepal international election kp politics oli
इन्टरनेट पोर्नको बलमा टिकेको छ ?
बीबीसी– इन्टरनेटबारे विगतदेखि नै एउटा अवधारणा व्याप्त छ । त्यो के भने इन्टरनेटको प्रयोग मुख्यत अन्तरङ्ग गतिविधिको लागि गरिन्छ । त्यो धारणा कत्तिको सही छ ? केही हदसम्म यसमा सत्यता नभएको होइन तर यो भनाई पुरै गलत भने होइन ।
लेखक प्याचन वार्स आफ्नो पुस्तक ‘द इरोटिक इन्जिन’ मा भिसिआरसँगसँगै पोर्न एक आर्थिक र प्राविधिक पावरहाउसको रुपमा उदाएको लेख्छन् । सुरुवातमा भीसीआर निक्कै महँगो थियो र दुई अलग–अलग रुपमा आउँथ्यो– भीएचएस र भिटाम्याक्सको रुपमा । कुनै पनि एक यस्तो उपकरणमा आम्दानीको एक ठूलो हिस्सा किन लाग्छ जुन शीघ्र पुरानो पर्नेवाला छ ?